खर्च गर्नेहरुलाई पनि चन्द्रमामा लान सकिने,चन्द्रमामा जान कति पैसा लाग्छ त? – " कञ्चनजंगा News "
खर्च गर्नेहरुलाई पनि चन्द्रमामा लान सकिने,चन्द्रमामा जान कति पैसा लाग्छ त?
No Comments on खर्च गर्नेहरुलाई पनि चन्द्रमामा लान सकिने,चन्द्रमामा जान कति पैसा लाग्छ त?
मानिसलाई चन्द्रमामा पुग्ने सपना जस्तै थियो । तर, अन्तरीक्षयात्रीहरु पुगेर फर्किए । तर, धेरै मानिसहरुका लागि यो अझै सपनामै सिमित छ । खर्च गर्नेहरुलाई पनि चन्द्रमामा लान सकिने तयारी भइरहेको छ । अन्तरीक्षमा केही पर्यटक पुगेर फर्किइसके । अब पैसा तिरेर जान चाहनेका लागि तयारी अन्र्तगत नासाले आफ्नो कार्यक्रममा घोषणा गरेको थियो ।
चन्द्रमामा मानिसलाई पुग्न एक प्रयासको रुपमा जारी गरिएको कार्यक्रम हो । कन्स्टेलेसन कार्यक्रम मूल रूपमा संयुक्त कार्यक्रम अन्तर्गत चन्द्रमा सम्म लाग्ने सुरुवात प्रणालीको विकास गर्न कोशिस गर्ने बताइएको छ ।
यो कार्यक्रमको कुल खर्च ९७ अर्व डलर रहेको छ । यसअघि अत्याधिक खर्च हुने र प्रगति नभएका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पालामा समाप्त गर्ने आदेश दिएका थिए ।कन्स्टेलेसन स्पेस ला‘न्च सिस्टम (एसएलएस) द्वारा पुनःकार्यक्रम सुरुवात गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
जसको विकासको लागिकरिब १५–३० अर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । एस.एल.एस. प्लानमिशनतर्फ बढी उन्मुख रहेको अपेक्षा गरिएको छ । यसले चालकदललाई लैजाने र चन्द्र कक्षमा अवतरण गर्न सक्ने अनुमान गरिरहेको छ ।
नासाको अनुसार आधुनिकचन्द्र ल्याण्डर अझै विकसित भएको छैन । एक सफल प्रयासको योजना रहेको छ । निरन्तर यसमा प्रयास जारी रहेको समेत नासाको प्रतिवद्धता रहेको छ । एसएलएस कार्यक्रम अझ सम्म निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको जनाइएको छ । यसको निर्धारण गरिएको पुजीले यसलाई निरन्तरता दिने अनुमान गरिएको छ । नया चन्द्र ल्यान्डरबाट यसलाई सफल बनाउने प्रयास गरिएको छ । चन्द्र ल्यान्डरको लागत करिब २.२ अर्ब हुनसक्ने बताइएको छ । यसका लागि प्रयास जारी रहेको नासाको भनाइ छ ।-एजेन्सी
← (साग) मा पदक जित्ने नेपाली खेलाडीहरूको सम्मानमा सरकारले घोषणा गरेको पुरस्कार अधुरो तत्काल पूर्णता दिन सरकारबाट (कृपया शेर गर्नुहोला) → नेपाली कथानक चलचित्र ‘सेल्फी किङ्ग’को क्यारेक्टर तस्बिर सार्वजनिक ( केहि तस्बिरहरु सहित)